Nhau - BXL Yakagadzirwa Inokunda Matatu Pentawards International Creative Awards
Mu "Pentawards Festival" kubva 22 - 24 Gunyana 2020, hurukuro dzehurukuro dzakapihwa. Iyo inozivikanwa graphic dhizaini Stefan Sagmeister uye iyo brand & yekugadzira dhizaini director weAmazon USA Daniele Monti vaive pakati pavo.
Vakagovana ruzivo rwechizvino-zvino mukugadzira uye vakakurukura madimikira akasiyana siyana anokanganisa indasitiri yekupakata nhasi, kusanganisira Nei Zvakanaka Zvekunaka; Kunzwisisa Tsika Dzinoreva Kusimbisa Brands & Kuisa; Iyo Boredom ye "Yakajairika" Dhizaini, nezvimwe.
Uyu mutambo unoonekwa wevakagadziri, uko hunyanzvi isingaganhurwe fusion. Seye mubairo weOscar mune yepasirese yekugadzira indasitiri dhizaini, ayo anokunda mabasa pasina mubvunzo anozova vane vane epasi rese zvigadzirwa kurongedza maitiro.
VaZhao Guoxiang, CEO weBXL Creative, akakokwa kuzopa mubairo wevakakunda platinum!
Pentawards Dhizaina Kukwikwidza
Ese matatu emabasa eBXL Creative akahwina mibairo mikuru.
Lady M Mooncake Chipo Bhokisi
Brand: Lady M Mooncake Chipo Bhokisi
Dhizaini: BXL Kugadzira, Mukadzi M
Mutengi: Mukadzi M Kutapurirana
Iyo humburumbira yekupakata inomiririra chimiro chekutenderedzwa kusanganazve, kubatana uye kuungana pamwechete. Zvikamu zvisere zveMonconcakes (sere iri nhamba ine rombo rakanaka mutsika dzekuMabvazuva) uye maberere gumi nemashanu anomiririra zuva reMid-Autumn Festival, Nyamavhuvhu 15. Iwo amambo-eruvara rwebhuruu eakaiswa akafuridzirwa nemavara eakajeka Autumn husiku denga kuitira kuti vatengi vatore hukuru hwematenga mudzimba dzavo. Ipo ichitenderedza zoetrope, nyeredzi dzakapunzika ndarama dzinotanga kupenya sezvavanobata kuratidzwa kwechiedza. Kufambisa kune simba kwezvikamu zvemwedzi zvinomiririra iyo nguva yemubatanidzwa wemhuri dzeChinese. Mumutauro wechiChinese, zvinonzi mwedzi ndiyo denderedzwa rinopenya kwazvo pazuva rino, zuva rekusanganazve kwemhuri.
Kazhinji, kurongedzwa kwemupunga kunoraswa mushure mekudyiwa, izvo zvinokonzeresa marara. Kuti urangarire eco-hushamwari kupakata maitiro, dhizaina weBXL Creative akagadzira mupunga kurongedza zvakare.
Inobatanidza zvine hungwaru basa, kushongedza, uye dhizaini dhizaini yechigadzirwa. Iyo retro uye ine yakakosha kushongedzwa. Inogona zvakare kushandiswa sezvishongo uye inogona kudzokororwazve kuti ibudirire kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Akazvarwa muChina "dhizaini dhizaini" -Shenzhen, BXL Kugadzira inogara inotevedzera kuchisungo chekuti Kugadzira uye Kugadzira ndiko kunobva kukura kwekambani.
Pashure: BXL Yakagadzira Packaging Guizhou Fekitori Yakasainwa!